ရသဆောင်းပါးစုံ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 159
ငြိမ်းချမ်းအေး သြဂုတ် ၄၊ ၂၀၁၂ လန်ဒန် အိုလံပစ် ဘော်လီဘောပွဲ သွားကြည့်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို အဒေါ်ဖြစ်သူက အားကစား ဝါသနာကြီးတဲ့ တူဖြစ်သူ ကျနော့်ကို တကူးတက ပို့ပေးရှာတယ်..။ သူ မသိတော့တာက ငယ်ငယ်တုန်းက အစွဲအလမ်းသိပ်ကြီးတဲ့ အားကစားဟာ ခု ကိုယ်နဲ့ ဘယ်လိုမှ မပတ်သက်တော့သလို ခံစားနေရတာကိုပဲ..။ စိတ်ခံစားမှုက ထူးတော့ ထူးဆန်းတယ်..။ No tags for this post.
Po Htet – ချို၊ အီ၊ မွှေး ဘီယာ
ချို၊ အီ၊ မွှေး ဘီယာ ဖိုးထက်ဇူလိုင် ၁၂၊ ၂၀၁၂ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၉၉၉၊ အောက်တိုဘာ ၁၂။ ကျနော် ခိုင့်ကို ရည်းစားစကားပြောခြင်းကိစ္စက ပူလောင်ခြောက်သွေ့နေသည့် မြက်တောကြီးကို မီးလောင်သကဲ့သို့ ကျောင်းဝန်းတစ်ခုလုံး ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ အလျှင်အမြန်ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ ခိုင်သည် အတော်လှသော အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ “အတော်” ဆိုသည့် မြန်မာစကားသည် ခိုင့်အတွက် လုံလောက်ချင်မှ လုံ လောက်ပါလိမ့်မည်။ ခိုင်သည် အလွန်လှပါသည်။ သူလှကြောင်းကို သူသိသော မိန်းမတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်သည်။ ဖြတ်သွားဖြတ်လာ ခိုင့် ကို မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့မိသည်ဆိုပါအံ့။ ပုရိသကျားသတ္တ၀ါများမဆိုထားဘိ မိန်းမခြင်းပင် နှစ်ခါပြန်ကြည့်ရလောက်အောင် ကုသိုလ် ကောင်းသောသူဖြစ်သည်။ ခိုင်နှင့်ကျနော်က ကျောင်းမှာ မေဂျာတူ။ အတန်းတူ။ အလွန်လှသော ခိုင့်ကိုကပ်ပြီး ချစ်ခွင့်ပန်သော ကျနော်လိုအကောင်တွေ အလွန်များ...
Ashin Dhamma Piya – လူ့စည်းကမ်းနှင့် လမ်းစည်ကမ်း
လူ့စည်းကမ်းနှင့် လမ်းစည်ကမ်း ဒေါက်တာ ဓမ္မပိယ။ ဇူလိုင် ၁၃၊ ၂၀၁၂ ပြောင်းပြီ ပြင်ပြီလား ခေတ်တွေပြောင်းလာပြီဆိုတော့ ….။ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကို ခေတ်မီတိုးတက်တဲ့အသွင်နှင့် တွေ့ချင်၊ မြင်ချင်သူတွေ တစ်နေ့တခြား များပြားလာနေခြင်းပါ။ အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ စောင့်ကြည့်ရတာ ကြာလာတော့ စိတ်မရှည်တဲ့ဟန်နဲ့ တိုးတက်မှုများ နှေးကွေးရကောင်းလားလို့ အားမလို၊ အားမရ ဖြစ်နေသူတွေကလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါ။ “ဘာမှလဲ ဖြစ်မလာသေးပါလား၊ ပြောတော့ မိုးလား ကဲလား̎ ” စသည်ဖြင့် ဟန်နဲ့ပန်နဲ့ ဝေဖန်ပြစ်တင် နေသူတွေကလဲ များမှများ။ “ဒီမိုကရေစီစနစ်ကလဲ ထင်သလောက်မဟုတ်သေးပါဘူးကွာ” လို့ ပြောသူကပြော။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူ၊ ပြည်သားတွေကို တစ်ခုတော့ပြောလိုက်စမ်းချင်သား။ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကို ဝေဖန်ဆွေးနွေးချင်ရင် အရည်အချင်းရှိရှိ ဝေဖန်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ စာများများဖတ်ကြဖို့ပါ။ အကြောင်းအချက် အလက်များကို...
Page 159 of 172«1...157158159160161...172»